ဂျီမေးလ်ကို အောက်လွတ်ကနေ သုံးကြမယ်… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Computers & Technology » ဂျီမေးလ်ကို အောက်လွတ်ကနေ သုံးကြမယ်…	12
Posted by Yae Myae Tha Ninn on Jul 1, 2016 in Computers & Technology, Software & Links | 12 comments
-တဂျီးရေ ဒီပို့စ်လဲ တချိန် လူကြည့်များလာလောက်တယ်…. ဟဲ… ကျိန်းသေတာက ကျွန်တော်က မေ့တတ်တော့ ကိုယ့်ဘာသာ ပြန်လာကြည့်ဖို့ များတယ်…
-အရင်ဆုံး ဘာတွေ ပြသနာတက်လဲ အရင်ပြောမယ်… ဂျီမေးလ်ကို အောက်လွတ်ထဲမှာသုံးမယ်ဆို POP နဲ့လား IMAP နဲ့လားဆိုတာ အရင်ရွေးရမယ်…
-အလွယ်ပြောရရင် POP နဲ့ဆိုရင် အော်ရီဂျင်နယ် Web နဲ့သုံးတဲ့ နေရာမှာရော နောက်ထပ် အခွဲ အောက်လွတ် သို့မဟုတ် ဖုန်းထဲကိုရော မက်ဆစ်တွေ ၀င်မယ်…
-IMAP ကတော့ တနေရာက ဆွဲလိုက်ရင် နောက်တနေရာမှာ အဲမက်ဆစ်ပေါ်တော့ဘူး… (မှားရင် ထောက်ပြဦးနော်…) ပြီးတော့ Option များတယ်… စမ်းလဲ စမ်းဘူး… -ကဲ.. POP ပဲ သုံးပြီဗျာ… ဒါဆို Setting ကို ထည့်ရပါမယ်… ဒါကလဲ လွယ်သေးတယ်… အောက်က Instruction ကို ဖော်လို လိုက်ရင် ရတယ်…
-ထည့်ခိုင်းတဲ့ အတိုင်း Incoming Mail Server မှာ pop.gmail.com ပေါ့… POPကို ရွေးထားရင် … Port က 995… ပြီးရင် Type Of Encrypted Connection မှာ SSL ပေါ့…
-Outgoing Mail Server မှာ smtp.gmail.com ပေါ့… Port က 465 or 587 … TOEC က SSL ပေါ့… TLS ရွေးရတဲ့အခါလဲ ရှိပါတယ်… ရှားပါတယ်…
-ဒါဆို အောက်လွတ်ဘက်ကိုသွားပြီ… ပုံ ၁ နဲ့ ၂ မှာ ဖော်ပြထားသလို လိုက်လုပ်ပေးပါ… အ၀ါရောင် ဟိုက်လိုက် တားထားတဲ့အတိုင်း ဖြစ်ဖို့တော့ လိုပါမယ်….
-ပုံ ၃ နေရာမှာတော့ ဖြည့်ရမယ့် အကွက်တွေကို အဲထဲကအတိုင်း လိုက်ဖြည့်လိုက်ပါ… ပြီးရင် More Settings ကို နှိပ်လိုက်ပါ…
-ပုံ ၄ မှာ ပြထားသလို My Outgoing Server (SMTP) အရှေ့က လေးထောင့်ကွက်မှာ အမှန်ခြစ်လေး ခြစ်ပေးပါ…
-Use Same Settings As My Incoming Mail Server အရှေ့က အ၀ိုင်းလုံးလေးမှာ အဆံထည့်ပေးလိုက်ပါ…
-ပုံ ၅ မှာ ပြထားသည့်အတိုင်း တသဝေ မတိမ်းလုပ်ပါ… ကိန်းဂဏန်းထည့်တာ လေးထောင့်ကွက်မှာ အမှန်ခြစ် ဖြုတ်တာ … အမှန်ခြစ်ထည့်တာ… အ၀ါရောင် -ဟိုက်လိုက်အတိုင်း လိုက်လုပ်ပါနော်… မှားလို့ မရပါဘူး… ပြီးရင် အိုကေ နှိပ်လိုက်ပါ…
-ပြီးပြီလားဆိုတော့ တခြမ်းပြီးပြီ… ဒါက အောက်လွတ်ဘက်အပိုင်း… -၀က်ဘ်ဖက်ကို ပြန်သွားပြီး2Step Verification On ရပါတော့မယ်…. ကိုယ့် ဂျီမေးလ်ထဲကိုဝင် ပုံပါအတိုင်း အဆင့်အဆင့်လုပ်လိုက်ပါ…
-ပထမဆုံး Setting ထဲက Accounts And Imports ထဲကိုသွား Change Password Recovery Options ထဲကို ၀င်ပါ…
-ပြီးရင် Sign In ထပ်ဝင်ရပါမယ်…
-အောက်ကပုံအတိုင်း ပေါ်လာရင်တော့ အ၀ါရောင် ဟိုက်လိုက်အတိုင်းလေး လုပ်သွားလိုက်ပါ…2Step Verification က On ကို On မှ ရမှာပါနော်…
-အ၀ါရောင် ဟိုက်လိုက်မှာ TURN OFF ဆိုရင် အဲအတိုင်း ရအောင် လုပ်ပါနော်… တကယ်တော့ ဖုန်း နဲ့ Verification မလုပ်ဖူးရင် ဒီအဆင့်က နည်းနည်း လည်ပါလိမ့်မယ်…
-သို့သော် မရှင်းပြတော့တာပါ… ရှင်းပြလိုက်ရင် တလွဲဖြစ်သွားမှာစိုးလို့ ပုံထဲက အတိုင်း ရအောင်သာ မဖြစ်ဖြစ် ဖြစ်အောင်သာ စမ်းပါနော်…
-အပေါ်က ပုံအတိုင်း ဖြစ်လို့ ကုတ်ထည့်ရပြီဆို အောင်ပါပြီ…
-App Password ထည့်နည်းပါ…
-ဦးစွာ Gmail Setting\_ Account And Import \_ Change Password Recovery Options ထဲ ပြန်ဝင်ပါ…
-ပြီးရင် ထဲမှာ အ၀ါရောင် ဟိုက်လိုက်အတိုင်း ရွေးပေးပါ….
-အောက်ပါ ပုံအတိုင်း မှာ Mail ကိုမှ Computer နဲ့ သုံးမလား ဖုန်းဆို ဘာအမျိုးအစား ရွေးပါမယ်…
-ပြီးရင် အ၀ါရောင် အကွက်ထဲက ကုတ်ကို ကော်ပီယူ ပြိး ဒုတိယမြောက်ပုံထဲက အ၀ါရောင် ဟိုက်လိုက်ပြထားတဲ့ Password အကွက်မှာ Paste လုပ်လိုက်ပါ…
-ဒါဆိုရင်တော့ အားလုံး ပြီးသွားပါပြီ… Test Account Settings နဲ့ စမ်းကြည့်ပါ… အ၀င်ရော အထွက်ရော အိုကေတာကို ပြပါမယ်… Password ကို အကြိမ်ကြိမ်နှိပ်ရမယ့်ဘေးကလဲ ဝေးသွားပါပြီ….
လာရောက်ဖတ်ရှု အားပေးသူများ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်…. မရှင်းလျှင် ကော်မန့်တွင်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်…. ရေမြေ့သနင်း
kai says: မြန်မာပြည်မယ်.. Outlook အသုံးများကြတာလား..
ဒီမှာတော့.. သာမန်ကုမ္ပဏီတွေက.. သိပ်မသုံး..။
Yae Myae Tha Ninn says: ဒီမှာက အော့လိုင်းရတယ်ဆိုပြီး သုံးကြတယ်… Web ထက်စာရင် ပိုရင်းနှီးလို့ ထင်တယ်… ဒါပေမဲ့ ရုံးက နိုင်ငံခြားသားတွေလဲ ဒါကို အားသန်ကြတယ်ဗျ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14462
kai says: ယူအက်စ်မှာ..Office 365 ကို အစိုးရကသုံးတယ်လေ…။
Tech Support လည်းကောင်း.. တိမ်ပေါ်က… လုံခြုံရေးလည်း M$ က..တာဝန်ယူတာကိုး…။
Yae Myae Tha Ninn says: office 365 တော့ သုံးဖူးဘူးဗျ… သူ့မှာရော ဗားရှင်းတွေ ခွဲထားသေးလား… ဒီမှာတော့ office 2013 က လိပ်တက်ပဲ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 9265
ဦးကြောင်ကြီး says: အောက်လွတ်ရင်းတော့ ဂျီမေးလ်မ၃ဂျနက် သာမီးတို့စ်…
Yae Myae Tha Ninn says: အအေးပတ်မှာစိုးလို့လား… ဦးကြောင်… :P
ဂျစ်စူ says: Mozilla Thunder bird ဆိုကလား ဘာလား
Yae Myae Tha Ninn says: အဲသဟာလဲ ဆက်တင် အတူတူပါပဲ… Display နည်းနည်းကွဲသွားတာပဲ ရှိတယ်… Window Live Mail ဆိုတာ ရှိသေးတယ်… Outlook နဲ့ မအိုကေရင် အဲဒါလေး နဲ့ လုပ်လဲ ရတယ်… လာမန့်ပေးတာ ကျေးဇူးပါ ကို ဂျစ်စူ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12181
Thint Aye Yeik says: ကျနော့်မှာ ချမ်းသာတာကတော့
Yae Myae Tha Ninn says: ဆက်ဆက်ရယ်… ကိုယ်တွေ သိတာက ဒါနဲ့ မန်မန်စားနေတာကိုး… အဲတော့ သိရမယ်လေ… ကိုယ်သိသမျှကို သေးငယ်တယ်လို့ ဘယ်တော့မှ မထင်ပါနဲ့… တခြားအရာတွေမှာ အကိုတို့ထက် ဆက်ဆက်သိတာ အများကြီးပါ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3716
လုံမလေးမွန်မွန် says: That’s what I really want.
Thanksalot. (Sorry I cannot type Myanmar font!
Yae Myae Tha Ninn says: အသုံးဝင်တယ်ဆိုရင်ပဲ ၀မ်းသာလှပါပြီဗျာ… မွန်မွန်ရယ်… လာအားပေးတာလဲ ကျေးဇူးနော်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.